You are at:Home»NHAU DZEKUMATARE»Oroverwa chitsidzo chepamuchato
By Munyori weKwayedza on	 July 6, 2018 · NHAU DZEKUMATARE
VANHU vaiva mudare vakakahadzika apo mumwe mukadzi akati ari kuoneswa pfumvu nemurume wake uyo anogara achimurova achiti ane mvumo yekumuzvindikita sezvo vakaita chitsidzo pavakachata chekuti vachaparadzaniswa nerufu.
Masara Chadya akaendesa Jackson Chadya kuHarare Civil Court achida kuti amiswe kumutyisidzira nekumurova.
“Murume wangu anondityisidzira pose patinopesana mafungiro kana kundirova zvakaipisisa,” anodaro.
Anoti Jackson ari kushandisa zvitsidzo zvavakaita pamuchato wavo vachiti vachaparadzaniswa nerufu.
“Ari kushandisa zvitsidzo zvepamuchato kundityisidzira achiti takapikira kuparadzaniswa nerufu saka ane mvumo yekundirova ndofa, ndiko kuti tisiyane.
“Kubasa chaiko anondirambidza kuenda achiti akati achandichengeta asi hapana kundichengeta kwaari kuita,” anodaro Masara.
Anoenderera mberi achiti akabva pamba asi Jackson ari kuramba achimutevera. “Ndakatobva pamba pandakawana basa asi iye ari kuramba achitevera nekunditumira mameseji achindituka nekundityisidzira,” anodaro Masara.
Jackson anoti haapikisane nechikumbiro chaMasara kunyangwe zvazvo achiti ari kutaura manyepo.
“Kana zviri izvo zvaari kuda handirambirane nazvo, asi kuti zvese zvaataura manyepo,” anodaro.
Anoti achiri kuda zvekutaura naMasara sezvo ari kugara nevana vanenge vachidawo amai vavo.
“Kuti ndisataure naye zvinonetsa nekuti akandisiya nevana, saka ndinogona kuzoda kutaura naye zvimwe zvinenge zvichidiwa nevana kana kuti vana vacho ndivo vanenge vachida kutaura, ndinozoita sei kana iye achiti haachada kutaura neni kana kundiona?” anodaro Jackson.
Masara anoti Jackson ane mvumo yekufona kana kutaura naye zvevana pasina kutukana.
“Kana zviri zvevana ngaataure neni asingandituke kana kundityisidzira,” anodaro.
Mutongi Manasse Musiiwa akapa Masara gwaro redziviriro.